सिंहदरबारमा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो कुराकानी ? « Sagarmatha Daily News
सिंहदरबारमा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनका दुई दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालबीच आज सिंहदरबारमा ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा दुई अध्यक्षबीच लगभग २० मिनेट जति ‘वान टु वान’ वार्ता भएको माओवादी स्रोतले बताएको छ । दुई अध्यक्षवीच भएको छलफलमा सरकारमा सहभागिता र सरकारका काममा केन्द्रित रहेको नेपालनिकट एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नसकेको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
न्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुवीच चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयका विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस पैदा भएको हो ।
सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए-नभएकोबारे अध्ययनका गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुको साथै सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेका बेला दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।